Inona no ahafahan'ny tranokalan'ny famoronana ahodin-drakitra mitondra tombony amin'ny tranokalanao?
Amin'izao fotoana izao, ny algorithms amin'ny alàlan'ny fikarohana dia lasa sarotra sy mahasalama kokoa. Google dia manome fenitra vaovao toy ny "DA" (Domain Authority) sy "PA" (Authority Page) hanolo ny pejy PageRank izay sarobidy alohan'ny. Ireo laharana vaovao dia ampiasaina betsaka mba hamaritana ny haavon'ny fahafahan'ny tranonkala.
Mba hananganana kalitao sy rindrambaiko hanorenana rohy dia nofinofin'ny tompon'ny tranonkala sy bilaogera rehetra. Ireo rindran-kira ambony dia afaka mitondra lanjany betsaka amin'ny tranokalanao. Voalohany indrindra, afaka manatsara ny laharana amin'ny serasera amin'ny SERP izy ireo. Faharoa, mitazam-potsiny izy ireo ary manova ny fifamoivoizana eo amin'ny tranokalanao ary fahatelo dia hampitombo ny fidiram-bolany.
Tsy mora ny mamerina rindran-dàlana avy amin'ireo toerana avo DA. Mila manana fahalalana sy fahaiza-manao manokana ianao mba hananganana fanentanana fananganana rindrambaiko. Na izany aza, tsy tokony ho kivy ianao na dia tsy mahatsapa aza ny traikefa amin'ity sehatra ity. Ho an'ity lahatsoratra ity dia hahita lisitry ny tranonkalan'ny avo DA izay manaiky ny fisoratana anarana avy amin'ireo mpampiasa vaovao ary hanome azy ireo fahafahana hamorona profil vaovao. Ankoatra izany, dia hizara soso-kevitra vitsivitsy momba ny famoronana profil favorlable aho.
Manomeza fijoroana vavolombelona
Raha mampiasa vokatra iray ianao ary afa-po amin'ny kalitaony, dia diniho mandefa fijoroana vavolombelona. Rehefa mamorona fijoroana vavolombelona ianao, tadidio fa afaka mametraka izany ao amin'ny pejiny na ny fijoroana vavolombelona ny mpamatsy iray. Raha ny fitsipika, ny mpamatsy dia mametraka ny rohinao eo akaikin'ny fijoroana vavolombelona mba hampisehoana fa tena olona ianao. Noho izany, afaka mahazo kalitao ianao ary lohamilina organika avy amin'ny fijoroana vavolombelona.
Katsaho ny fahafahana mifandray amin'ny mpiblôgy
Raha toa ka manome ny vokatra avy amin'ny rindrambaiko, Amboary izany amin'ny rindran-damina mahazatra sy avo lenta. Azonao atao ny mahazo azy ireo amin'ny fanomezana azy ireo ho an'ny mpitoraka bilaogy na mangataka ny mpanjifa handao ny feedback.
Manaraka ity torolàlana ity mba hahazoana rohy mahazatra ho an'ny tranokalanao amin'ny alalan'ny fanamarihana ny mpitoraka blaogy:
Mitadiava mpitoraka blaogy ao amin'ny nichanao izay efa nandefa zavatra mifandraika amin'ny indostria. Ampidiro ao amin'ny boaty fikarohana Google ny fikarohana miaraka amin'ny teny fanalahidy tianao. Vokatr'izany, ny milina fikarohana dia hanome anao lisitry ny tranokala sy ny blaogy miresaka ny indostrianao.
Nisafidy ireo tranonkala lehibe rehetra sy tranonkala vaovao. Amin'ny farany, ho tavela amin'ny lisitry ny lisitry ny mpamaham-bolongana izay mety mahaliana anao amin'ny tolotra.
Mitondrà mailaka na antso an-tariby amin'ny tompon'ny tranonkala sy ny mpamaham-bolongana. Aoka ianao ho tsara fanahy sy hidera azy ireo ary mitandrema tsara momba ny fiteny ampiasainao. Azonao atao ny manontany anao momba ny fandoavam-bola na ny fepetra hafa mahasoa.
Ny famerenana ny rohy
Ny famerenana amin'ny rohy dia fomba tsotra ahafahana manangom-bokatra mahery ny tranokalanao. Mila mahita ny fanamarihana momba ny tranonkalanao ianao izay tsy ahitana ny rohy misy anao. Ny zavatra rehetra ilainao dia ny mifandray amin'ny mpanoratra ity resaka ity ary angataho izy hampiditra ny rohy. Ny rohy bakoka toy izany dia mifidy ny marikao ary manangana ny mombamomba ny tranonkalanao eo imason'i Google Source .